Ngwongwo ntanye nke nnyefe ntuziaka bụ nke ndị na-eri ihe. Na ojiji nke ụgbọala, ipigide efere ga-eyi ntakịrị. Mgbe ejiji ruru ogo ụfọdụ, ọ dị mkpa ka edochi ya. Olee otú anyị pụrụ isi mara na ipigide efere ga-agbanwe? Dabere na ahụmịhe gara aga, echere m na ọ bụ ...GỤKWUO »
Ngwaahịa ire ọkụ dị ugbu a na Enweghị MOQ!
Afọ a abụrụla ihe siri ike nye anyị niile n'ihi ọrịa corona. Anyị nwere olile anya na anyị nwere ike ịrụkọta ọrụ ọnụ ịlanarị ma nwee ọganiihu. Anyị akwadebewo ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe na China na Dubai maka gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịlele ọnụahịa maka ihe ndị ọzọ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Kpọtụrụ: +86 1887580 ...GỤKWUO »
1. 1 MOQ mpempe, awa 24 nzipu. 2. storeslọ ahịa na-ere ahịa na Dubai na Guangzhou 3. Nnukwu nnweta ngwaahịa 4. Ngwaahịa zuru oke dị oke njọ karịa 7000+ Koodu dị iche iche 5. Mmekọrịta nke ndị nrụpụta 8 nwere ihe karịrị afọ 10 na mmepụtaGỤKWUO »